Inona no fitenin'ny anjely selestialy ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Inona no fitenin'ny Anjely any an-danitra. Indray mandeha ihany ny fitenin’ny anjely ao amin’ny Baiboly. Na izany aza, io andalana io dia manazava fa ny fitiavana dia zava-dehibe kokoa noho ny fitenenana fiteny maro fantatra sy tsy fantatra. Ny fitenin’ny anjely dia maneho fiteny tsy fantatra.
"Raha miteny amin'ny fitenin'olombelona sy ny anjely aho, nefa tsy manam-pitiavana, dia tonga tahaka ny metaly maneno aho, na kipantsona mikarantsana.«. 1 Korintiana 13:1
1 Manana fiteniny manokana ve ny anjely?
2 Inona no tian’i Paoly holazaina tamin’ny hoe “fitenin’ny anjely”?
3 Iza no manana fanomezam-pahasoavana hiteny ny fitenin’ny anjely?
Manana fiteniny manokana ve ny anjely?
Tsy afaka niteny izahay inona no fitenin'ny Anjely any an-danitra, satria ao amin’ny Baiboly ihany no misy anjely mitondra hafatra fiteny azon’ny olombelona. Tsy misy firesahana firy ny fiteny ampiasain'ny anjely, na manana fiteny iray na maromaro amin'ny azy manokana. Ny fifandraisan’ny olona sy Andriamanitra no ifantohan’ny Baiboly, fa tsy ny anjely.
Ao amin’ny Baiboly, dia miresaka amin’ny anjely mampita hafatra avy amin’Andriamanitra amin’ny olona sasany, mampiasa fiteny mahazatra, na midera an’Andriamanitra.
«Miderà azy, ry anjeliny rehetra;
Miderà Azy, ianareo miaramilany rehetra.» Salamo 148:2
Tsy fantatsika raha manana fiteny manokana hiderana an’Andriamanitra ny anjely.
Inona no tian’i Paoly holazaina tamin’ny hoe “fitenin’ny anjely”?
Nanazava izany i Paoly ny tena zava-dehibe dia ny tsy fahaizana fiteny maro, ny tena zava-dehibe dia ny fitiavana. Tena nankasitraka ny faharanitan-tsaina sy ny fanehoana ara-panahy ny olona tao amin’ny fiangonana Korintiana. Tena tsara izany rehetra izany, saingy rehefa mifankatia isika, dia tsy misy vidiny. Tsy naneho fitiavana ny Kristianina tany Korinto.
«Ary raha nanana faminaniana aho ka nahalala ny zava-miafina rehetra sy ny siansa rehetra, ary raha nanana ny finoana rehetra aho, ka nafindrako ny tendrombohitra, ka tsy manana fitiavana, dia tsinontsinona aho.
Ary na dia zaraiko aza ny fananako rehetra hohanin’ny malahelo, ary na dia natolotro hodorana aza ny tenako, ka tsy manana fitiavana aho, dia tsy mahasoa ahy izany”. 1 Korintiana 13: 2-3
Amin'ity andalana ity, ny fitenenana "ny fitenin'ny olona" dia maneho ny faharanitan-tsaina, ny kolontsaina. Ny fitenenana ny "fitenin'ny anjely" dia maneho ny ara-panahy, ny fifandraisana amin'ny supernatural.
Iza no manana fanomezam-pahasoavana hiteny ny fitenin’ny anjely?
Tsy misy firesahana ao amin’ny Baiboly momba ny fanomezam-pahasoavana miteny amin’ny fiteny tsy fantatra mifandray amin’ny fitenin’ny anjely. Noho izany, tsy fantatsika raha miteny amin'ny fiteny hafahafa ny fitenin'ny anjely .
Ny olona sasany manana io fanomezam-pahasoavana io dia miteny amin'ny fiteny azon'ny hafa, izay mampiseho mazava fa tsy miteny ny fitenin'ny anjely izy ireo. Misy koa miteny amin’ny fiteny tsy fantatra, ary tsy lazain’ny Baiboly hoe fiteny inona izy ireo. Milaza fotsiny izy ireo fa zava-miafina izy ireo, Andriamanitra ihany no mahatakatra, tsy milaza fa ny anjely ihany koa no mahatakatra.
«Fa izay miteny amin’ny fiteny tsy fantatra dia tsy miteny amin’olona, ​​fa amin’Andriamanitra; fa tsy misy mahalala Azy, na dia ny Fanahy aza no itenenany zava-miafina ». 1 Korintiana 14:2
Ary ankehitriny fantatsika ny dikan'izany Inona no fitenin'ny Anjely any an-danitra, azontsika tsara kokoa ny hafatr’Andriamanitra. Raha mahaliana anao ny mahafantatra Inona ireo foko roa ambin'ny folo amin'ny Isiraely, tsidiho hatrany ny tranokalanay discover.online mba tsy ho very tsipiriany.